Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Barbados » Barbados kwụsịrị na Royal Britain: na-ele anya Africa
Foto sitere n'ikike nke NT Franklin sitere na Pixabay
N'otu oge gara aga etiti abalị na Nọvemba 30, mba agwaetiti Barbados kewara njikọ ikpeazụ ya na Briten na-achị ọchịchị wee ghọọ mba mba na-eme mmemme nke egwú brass na ụgbụ ígwè Caribbean. Queen Elizabeth II, onye na 95 na-agaghịzi eme njem na mba ọzọ, bụ nwa ya nwoke na onye nketa ya, Prince Charles, Onye isi ala Wales, onye kwuru okwu dị ka naanị “onye ọbịa a na-asọpụrụ.”
Onye isi ahụ kesara kpakpando nke ihe nkiri ahụ, Rihanna, onye na-agụ egwú Barbados na onye ọchụnta ego bụ akara ngosi obodo ama ama. Ọ natara aha dike mba n'aka Prime Minister Mia Amor Mottley, onye n'okpuru onye ndu Barbados wepụrụ nzọụkwụ ikpeazụ site na okpueze n'agbanyeghị oku maka ntuli aka.
Na ntuli aka mba na Jan. 19, nke a kpọrọ ọnwa 18 tupu njedebe nke oge mbụ ya n'ọchịchị, Mottley, nwanyị mbụ ga-abụ praịm minista nke Barbados, duuru Barbados Labour Party ya na nke abụọ, mmeri mechiri maka afọ ise. oge na House of Assembly, obere ụlọ na Barbadian nzuko omeiwu. Ntuli aka ahụ dị mkpa: ndị otu ya weghaara oche 30 niile, n'agbanyeghị agbụrụ ụfọdụ siri ike.
"Ndị obodo a ejirila otu olu kwuo okwu, n'otu ntabi anya na n'ụzọ doro anya," ka o kwuru n'okwu emume ya tupu chi ọbụbọ na Jenụwarị 20. N'èzí isi ụlọ ọrụ pati ya, ndị na-akwado ya na-enwe ọṅụ - kpuchie, dị ka onye ọ bụla nọ n'ọha ọha na Barbados. - yi uwe elu na-acha uhie uhie nke na-agụ, "Nọrọ na Mia."
Ụwa ga na-anụkwu ya. Asịrị na onye odeakwụkwọ ukwu UN António Guterres bịakwutere ya ka ọ rụọ ọrụ ndụmọdụ zuru ụwa ọnụ n'aha ya bụ ụlọ ọrụ Mottley jụrụ, nke kwuru na praịm minista "amaghị maka mmepe ọ bụla ga-adaba n'ọnọdụ nke ọnọdụ ahụ. asịrị nke ị jụrụ ajụjụ banyere ya.”
Barbados abụghị onye mbụ na-achị Briten wetuo ọkọlọtọ eze, na-ejedebe ọrụ ọchịchị eze, nke na-abụkarị emume ugbu a, nke ịhọpụta onye isi gọvanọ nke obodo mbụ. Barbados nwetara nnwere onwe na 1966 ka ọtụtụ narị afọ nke ọchịchị colonial gasịrị. Ruo ugbu a, ọ nọgidere na-ejikọta ya na eze.
Otú ọ dị, nke a bụ oge mgbe ihe ndị a na-achọ maka nhazigharị ọhụrụ na n'ikpeazụ ikpochapụ ihe fọdụrụ nke ịchịisi na-enweta mmasị na mba ndị ka na-emepe emepe. Mottley, 56, bụ onye mmeri maka ihe kpatara ya, ka ọ na-enyocha ike etinyeghị ya n'ịzụlite mmekọrịta siri ike na Africa.
Gburugburu ụwa, “mwepụ n'ike” nke nyocha ahụike na ahụike ọha, dịka ọmụmaatụ, bụ okwu gbagoro n'ihu na ọrịa Covid. N'otu oge ahụ, oku maka "ịkwado ọchịchị" nke ihe omume mba ụwa na-achọ ka mkpebi amụma zuru ụwa ọnụ ekwesịghị ịbụ ikike nke nnukwu ike.
N'ime ogbako mebere nke ọtụtụ ndị isi Africa na Caribbean na Septemba, Mottley tinyere ụkpụrụ nke ịchịisi n'ịkpọlite ​​na ịkwalite omenala trans-Atlantic iji nyere aka merie ajọ ihe nketa nke ịgba ohu.
Anyị maara na nke a bụ ọdịnihu anyị. Nke a bụ ebe anyị maara na anyị ga-ebu ndị anyị, "ka o kwuru. "Afrịka gị [Africa] bụ ebe nna nna anyị, anyị na gị nwekwara ọtụtụ ụzọ n'ihi na Africa dị anyị gburugburu na n'ime anyị. Anyị esichaghị Africa.
“Ana m arịọ anyị ka anyị ghọta na ihe mbụ anyị na-aghaghị ime, karịa ihe ọ bụla ọzọ . . . bụ ịzọpụta onwe anyị pụọ n'ohu uche - ohu uche nke nwere anyị ịhụ North naanị; ohu uche nke nwere anyi ahia North; ịgba ohu nke uche nke nwere anyị adịghị aghọta na n'etiti onwe anyị anyị mejupụtara otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mba nke ụwa; ịgba ohu nke uche nke gbochiri njikọ azụmaahịa ozugbo ma ọ bụ ụgbọ njem ikuku n'etiti Africa na Caribbean; ịgba ohu nke uche nke gbochiri anyị ịweghachite ọdịnihu Atlantic anyị, nke e guzobere n'onyinyo anyị na ọdịmma nke ndị anyị."
O kwuru na ndị sitere na ndị ohu Africa kwesịrị inwe ike ịga leta mba ndị dị n'akụkụ abụọ nke Atlantic wee maliteghachi omume ọdịnala na-ekekọrịta, ruo na nri ha na-atọ ụtọ. “Ndị Caribbean chọrọ ịhụ Africa, ndị Africa kwesịrị ịhụ Caribbean,” ka o kwuru. "Anyị kwesịrị inwe ike ịrụkọ ọrụ ọnụ, ọ bụghị maka ọdịmma nke ndị ọrụ obodo colonial ma ọ bụ n'ihi na ndị mmadụ kpọtara anyị ebe a megidere ọchịchọ anyị. Anyị kwesịrị ime ya dịka nhọrọ nke nhọrọ, dịka ihe gbasara ọdịnihu akụ na ụba. "
N'ime ozi ụbọchị ekeresimesi 2021 o degaara Barbadian, Mottley gbasaara karịa, na-achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ maka obere mba ahụ "na-akụ ọkpọ karịa ibu ya."
Barbados nọ nso n'elu mmepe mmadụ na mpaghara Latin America-Caribbean, ebe dị mma maka ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ. Na ụfọdụ ndị ọzọ - Haiti pụtara maka ọdịda ya dị egwu - mpaghara Caribbean nwere ndekọ dị mma.
N'afọ 2020, mkpesa mmepe mmadụ nke United Nations Development Programme (dabere na data 2019) gbakọrọ na ndụ ụmụ nwanyị n'oge ọmụmụ na Barbados bụ afọ 80.5, ma e jiri ya tụnyere 78.7 maka ụmụ nwanyị n'ofe mpaghara ahụ. Na Barbados, ụmụ agbọghọ nwere ike ịtụ anya ruo afọ 17 nke agụmakwụkwọ dị site na nwata ruo na ọkwa mahadum, ma e jiri ya tụnyere afọ 15 na mpaghara. Ọnụ ọgụgụ ndị okenye Barbadia gụrụ akwụkwọ karịrị pasentị 99, ogidi nke ọchịchị onye kwuo uche ya.
N'ile anya n'èzí kemgbe ọ malitere ọrụ na 2018 maka oge mbụ na mmeri ntuli aka ọdịda nke Barbados Labour Party nke etiti ya, Mottley ewepụtala profaịlụ mba ụwa siri ike. Okwu ya siri ike na UN General Assembly na Septemba na nkatọ acerbic nke mkparịta ụka ihu igwe zuru ụwa ọnụ (lee vidiyo dị n'okpuru ebe a) dọtara uche maka ikwu eziokwu siri ike na ikike ịkpali ndị na-ege ntị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ onye ndú nke mba ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke obodo ukwu London, nke ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya dị ihe dị ka 300,000, nke tụnyere nke Bahamas.
"Anyị na-agwụ n'afọ a, 2021, na-emebisị usoro ụlọ ọrụ ikpeazụ nke ọchịchị anyị n'oge gara aga, na-eweta njedebe ụdị ọchịchị nke dịruru afọ 396," ka o kwuru n'ozi ekeresimesi ya nye mba ahụ. "Anyị ekwupụtala onwe anyị dịka onye omeiwu Republic, na-anabata ọrụ zuru oke maka ọdịnihu anyị na karịa ihe niile, na-etinye onye isi obodo Barbadian mbụ na akụkọ ihe mere eme anyị." Sandra Prunella Mason, onye bụbu Gọvanọ-General, onye ọka iwu Barbadia, ka a ṅụrụ iyi na Nov. 30 dị ka onye isi ala mbụ nke mba ahụ.
"Anyị na-aga n'ihu, ndị enyi m, na obi ike," Mottley kwuru n'ozi ya. “Ekwere m na nke a bụ ihe akaebe na-egosi ntozu okè anyị dị ka ndị mmadụ na dị ka mba agwaetiti. Ugbu a, anyị nọ n'ọnụ ụzọ 2022. Anyị kpebisiri ike ịmaliteghachi njem ahụ Barbados ịghọ ọkwa ụwa site na 2027."
Ọ bụ usoro toro ogologo.
Akụ na ụba Barbadian kwụsịrị n'ihi mfu n'oge ọrịa ọrịa na-akpata ego dị oke mkpa site na njem nlegharị anya ya kachasị elu, mana praịm minista kwuru na ndị njem na-amalite ịla azụ. Central Bank of Barbados na-ebu amụma na njem nlegharị anya ga-agbake nke ọma na 2023.
Mottley dị jụụ na nnukwu ọkwa. O biri na London na New York City, nwetara akara ugo mmụta iwu na London School of Economics (na-emesi ike na nkwado) ma bụrụ onye ọka iwu nke ụlọ mmanya na England na Wales.
Akụkọ mmalite nke Barbados n'okpuru ọchịchị Britain gbagoro n'ọtụtụ narị afọ nke nrigbu na nhụsianya. N'oge na-adịghị anya mgbe ndị nwe ala ọcha mbụ malitere ịbata na 1620, na-achụpụ ụmụ amaala n'ala ha, àgwàetiti ahụ ghọrọ ebe a na-ere ahịa ohu Africa na Western Hemisphere. N'oge na-adịghị anya Briten meriri ịzụ ahịa trans-Atlantic wee wulite akụ na ụba mba ọhụrụ na nke nwere ọganihu maka ndị ama ama Britain n'azụ ndị Africa.
Ndị nwe ihe ọkụkụ nke Britain mụtara n'aka ndị Portuguese na Spanish, bụ ndị webatara ọrụ ohu na ihe onwunwe ha na-achị na 1500, otú usoro ahụ si enweta uru na ọrụ efu. N'ubi shuga nke Barbados, a na-eji ya mee ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọtụtụ narị puku ndị Africa bụ ndị na-akparịta ụka, ndị a napụrụ ikike ha n'okpuru iwu ịkpa ókè agbụrụ. E wepụrụ ịgba ohu n’alaeze Briten n’afọ 1834. (A kagburu ya na steeti ndị dị n’ebe ugwu America n’agbata afọ 1774 na 1804, ma ọ bụghị n’ebe ndịda ruo n’afọ 1865.)
A kọrọ akụkọ banyere ịgba ohu na Barbados n'akwụkwọ 2017 dabere na nyocha nke ndị ọkà mmụta nwere ihe ngosi dị egwu nke ndụ Afro-Caribbean: "The First Black Slave Society: Britain's 'Barbarity Time' na Barbados 1636-1876." Onye edemede, Hilary Beckles, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Barbados, bụ osote onye isi oche nke Mahadum West Indies, nke bipụtara akwụkwọ ahụ.
Beckles abụrụla onye na-akwado nkwado nke nkwụghachi ụgwọ maka ịgba ohu nke na-akpachapụ anya mgbe niile ndị ama ama Britain, ndị na-ahụ maka ego London na ụlọ ọrụ ha mepụtara site na uru nke ịgba ohu. Ụlọ ọrụ Britain abụghị nanị na ọ kwụsịrị imezigharị, ọ na-arụrịta ụka, ma ọ dịghịkwa mgbe ọ gwaghị ndị Britain eziokwu banyere egwu egwu nke ndụ Afro-Caribbean.
Prince Charles, n'okwu ya nke Nov. 30 maka inyefe nke ikpeazụ nke ikike eze nye mba ọhụrụ ahụ, mere ka ọ bụrụ naanị ihe na-agafe agafe na nhụjuanya nke ndị ohu Africa na-adị ogologo narị afọ ma lekwasị anya kama n'ọdịnihu dị mma maka British-Barbados. mmekọrịta.
"Site n'ụbọchị ndị kasị njọ nke anyị gara aga, na arụrụ arụ nke ịgba ohu, nke na-emebi akụkọ ihe mere eme anyị ruo mgbe ebighị ebi, ndị bi n'àgwàetiti a jiri obi ike pụrụ iche jiri obi ike na-akpaghasị ụzọ ha." “Ntọhapụ, ọchịchị onwe onye na nnwere onwe bụ isi ụzọ gị. Nnwere onwe, ikpe ziri ezi na mkpebi onwe onye bụ ndị nduzi gị. Ogologo njem gị ebutela gị n'oge a, ọ bụghị dị ka ebe ị na-aga, kama dị ka ebe ị ga-esi nyochaa ọhụụ ọhụrụ."
Nke mbụ Barbara Crossette, onye nchịkọta akụkọ ndụmọdụ na onye ode akwụkwọ nyere PassBlue na onye nta akụkọ United Nations maka The Nation.
Ọzọ na: Caribbean | United Nations | England | Africa | Bank | Haiti | Latịn | Barbados | Christmas | London | Economics
Ntụkwasị obi nke ndị njem na-arị elu Latịn|
Ndị njem nlegharị anya Caribbean kpọrọ onye ndụmọdụ nkwukọrịta ozi ọhụrụ Caribbean|
Ọdịnihu nke njem azụmahịa London|
London Heathrow chere eziokwu siri ike ihu Bank, England|
Africa Bank Barbados Caribbean Christmas Economics England Haiti Latịn London United Nations
Ahịa Protease nri anụmanụ- Mmepe pụtara ìhè...
South African Airways akpọla North America ọhụrụ…